Banky Iraisam-pirenena: mihena ny fandrosoana maneran-tany | NewsMada
Banky Iraisam-pirenena: mihena ny fandrosoana maneran-tany
Par Taratra sur 16/01/2019
Hihena ny fandrosoan’ny firenena eo amin’ny toekarena rehetra amin’ny ankapobeny maneran-tany amin’ity taona 2019 ity. Hihena ny fifanakalozana momba ny varotra sy ny fampiasam-bola iraisam-pirenena. Hitombo ny fifandirana amin’ny varotra.
Tsy mihetsika firy ny fitomboan-karena amin’ity taona 2019 ity. Araka ny tombantomban’ny Banky iraisam-pirenena, hiadana tsy araka ny vinavina ny fanondranana entana mikasika ny vokatra fototra, toy ny sakafo fototra, ohatra, sy ny toekarena ankapobeny. Hihena, toraka izany, koa ny fanafaran’ny firenena mahazatra ireo entana ireo. Vao mainka hitombo ny olana eo amin’ny fifanakalozana momba ny varotra ka hiantraika any amin’ny fihariana samihafa. Ho maro koa ny tsindry momba ny vola ho an’ny tsena lehibe ho an’ny firenena vao misandratra toy ny efa nisy tamin’ny taona 2018.
Zara raha 1,7% ny any Amerika Atsimo
Manodidina ny 2,9% ny salanisan’ny tahan’ny fitomboana maneran-tany. Tsy hihetsika manodidina ny 4,2% ny salanisan’ny tahan’ny fitomboana any amin’ny firenena vao misondrotra sy ny an-dalam-pandrosoana. Any Azia, manodidina ny 6 % ny fitomboan-karena amin’ity taona ity raha 6,3% ny tamin’ny taona 2018 ary 6,6% ny taona 2017.
Kaontinanta tena kely ny fitomboan- karena (sady nitombo kely) ny any Amerika Atsimo, vinavinaina ho 1,7% amin’ity taona ity raha tsy nisy afa-tsy 0,6% ny taona 2018 ary 0,8% ny taona 2017.
2016 2017 2018e 2019p 2020p 2021p
Maneran-tany 2.4 3.1 3.0 2.9 2.8 2.8
Firenena mandroso 1.7 2.3 2.2 2.0 1.6 1.5
Firenena vao misondrotra sy an-dalam-pandrosoana 3.7 4.3 4.2 4.2 4.5 4.6
Azia Atsinanana sy Pasifika 6.3 6.6 6.3 6.0 6.0 5.8
Eoropa sy Azia Afovoany 1.7 4.0 3.1 2.3 2.7 2.9
Amerika Atsimo sy Karaiba -1.5 0.8 0.6 1.7 2.4 2.5
Firenena Arabo sy Afrika Avaratra 5.1 1.2 1.7 1.9 2.7 2.7
Azia Atsimo 7.5 6.2 6.9 7.1 7.1 7.1
Afrika atsimon’i Sahara 1.3 2.6 2.7 3.4 3.6 3.7